गाँजा खेती र घरेलु मदिराको बिक्री खुलाएर नेपाललाई धनी बनाउने अभियानमा सांसद दम्पती। – Khabar PatrikaNp
गाँजा खेती र घरेलु मदिराको बिक्री खुलाएर नेपाललाई धनी बनाउने अभियानमा सांसद दम्पती।
July 28, 2020 229
सांसद तामाङले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक अगाडि बढेको छैन।
यहीबीचमा अर्को एउटा अभियान सुरु भएको छ– ‘लोकल रक्सीलाई ब्यान्ड होइन, ब्रान्ड बनाऔं।’
यसको थालनी गरेकी हुन्, प्रदेश १ की सांसद उषाकला राईले।
सांसद राई र तामाङ दम्पती हुन्।
घरेलु मदिरा पोख्ने कार्य साम्राज्यवादको षड्यन्त्र भएको उनको आरोप छ। नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रक्सी बेच्न कुनै प्रतिबन्ध छैन। लाइसेन्स लिएर व्यवसायीले खुलेआम बेच्न सक्छन्। तर घरेलु मदिरा बिक्रिवितरण लुकिछिपी मात्रै हुने गरेको छ।
गणतन्त्रका सरकारले यस्तो गर्नुलाई गलत भएको राईको तर्क छ।
‘हिजोको सरकार त्यस्तै थियो, अब त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको छ। अब त हाम्रो सरकार छ, हामीले हाम्रा दिदीबहिनीहरुको कुरा बुझ्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्।
घरेलु रक्सीलाई पनि विभिन्न ब्रान्डका रुपमा स्थापित गर्न सकिने उनको मत छ।
सरकारले यसलाई नियमन गर्ने विधेयक ल्याउने आशा उनले व्यक्त गरिन्।
पतिको गाँजा खुलाउने अभियानलाई पनि उनको समर्थन छ।
Prevवास्तुशास्त्रअनुसार यी चीजहरु सिरानी मुनि राखेर सुत्नुस्, भाग्य चम्किन्छ
बुधवार यी १० कुराहरु अपनाउनुहोस लाभ मिल्नेछ !
फलफूल र तरकारीबाट कोरोना सर्दैन, पैसामा ४ दिनसम्म रहन सक्छ: डाक्टर लुना भट्ट
साङ्लाले हैरान पारेको छ ? कसरी छुट्करा पाउने त ?